जनजातिका महिलाले पनि त महिनावारी बार्दैनन् । उनीहरू पापी भए त ? - Baikalpikkhabar
कोरोना काल बाहेकका समयमा भारतको आसाममा हिन्दुहरूले असाध्यै मान्ने कामाख्यादेवीको मन्दिर असारमा ४ दिन बन्द हुन्छ । किनभने असार महिनामा देवीको महिनावारी हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यो बेला कसैले पनि देवीको दर्शन पाउँदैन । देवीको अनुमानित योनिको अगाडि पुजारीले सफा कपडा राखिदिन्छन् र ४ दिनपछि ‘रगतले भिजेको कपडा’ भक्तजनलाई बाँडिन्छ । देवीले महिनावारीका बेला प्रयोग गरेको कपडा पाइयो भने भाग्योदय हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । ‘त्यो रगतले भिजेको कपडा लिन चाहने भक्तको भिड हुन्छ । सानो–सानो टुक्रा पारेर बाँडिन्छ, ताकि यस्तो दिव्य प्रसाद सबैले पाउन सकुन् । तर पनि कतिजना भक्तजन यो दिव्य प्रसाद पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् र अँध्यारो अनुहार लिएर फर्कन्छन्,’ मन्दिर घुमाउन लैजाने व्यक्तिले मलाई भनेका थिए, ‘कति भक्त त रातिदेखि नै लाइन बस्छन् ।’
तर अपशोच यो छ कि अझै पनि धेरै किशोरी र महिला महिनावारीका बेला अपमानित हुन्छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने संस्कृति पछ्याइन्छ । काठमाडौंमा बसेका पढेलेखेका विभिन्न सरकारी अफिस र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने महिला पनि सुदूर पश्चिमको छौपडीचाहिँ नराम्रो तर आफ्नो घरमा भनेर बारेको चाहिँ राम्रो भन्छन् । केही दिनअघि एक दिदीसँग यही विषयमा कुराकानी हँ‘दा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म अरू कुरा त मान्दिन, तर महिनावारी हँ‘दा पूजापाठ गर्न र भान्छामा छुन भने सक्दिन । मेरी छोरी बंैककमा काम गर्छिन् । म त उनलाई पनि नेपाल आउँदा महिनावारी भएका बेला भान्छामा नआउन, पूजाकोठमा पनि नजान भन्छु ।’ मैले उनलाई कामाख्या देवीको महिनावारीको किंवदन्ती सुनाए र सोधेँ, ‘के तपाई असारको बेला महिनावारी भएकी कामाख्यादेवीको महिनावारीको रगतले भिजेको टालो भक्तजनले लिए जस्तै गरेर लिनुहुन्छ ?’ अनि मैले आफूले महिनावारी हुँदा कसैलाई पनि नभनेको कुरा बताएँ । उहाँले विस्फारित नेत्रले मलाई हेर्नुभयो ।
सबैलाई मेरो प्रश्न छ, के मैले महिनावारीका बेला छुट्टै नबसे, भान्छामा छोए, मन्दिर गए पाप लाग्छ ? नेपालका विभिन्न जनजातिका महिलाले पनि त महिनावारी बार्दैनन् । उनीहरू पापी भए त ? महिनावारीका बेला छौपडीको विरोध गर्नेहरूले आफ्नो मानसपटलमा रहेको छौपडीचाहिँ कहिले हटाउने ?
शनिबार, ०५ असार, २०७८, रातीको १०:०७ बजे